गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आयोजनामा आगामी १२ र १३ अक्टोवरमा दुई दिने विज्ञ सम्मेलन र विधानसभाको आयोजना गर्दैछ । विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका नेपालीहरु र नेपालप्रति चासो राख्ने विदेशी विज्ञहरुसाग नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न विश्व–विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा व्यवसायिक संस्थालाई जोड्ने अभिप्रायले आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनका सन्दर्भमा सम्मेलन संयोजक द्वय डा. हेमराज शर्मा तथा कुमार पन्तसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ...
काठमाडौंमा विज्ञ सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ, विशेषतस् यो सममेलनको अवधारणा के हो ?
गैरआवासीय नेपालीहरु जसरी आर्थिक रुपमा सवल हुने बाटोमा छन, ज्ञान सीप र प्रविधीको क्षेत्रमा पनि त्यती नै सक्षम छन् । नाम चलेका अन्तर्रा्ष्ट्रिय विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रदेखि लिएर सरकारको नीतिगत तहमा काम गरेका थुप्रै गैरआवासीय नेपालीहरु छन । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु पनि विकसित देशको सीप र प्रविधीमा पोख्त भइसकेका छन् । उनीहरुले आफूले सिकेको सीपलाई नेपालको लागि सदुपयोग गर्न चाहन्छन् । नेपाल सरकार र एनआरएनले उनीहरुको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने सोचका साथ यो सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । त्यसको लागि यो सम्मेलन कोसेढुङ्गा हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।
सम्मेलनका सबै बिषयहरु आम जन जिविकासँग जोडिएका छन । यसका साथै सरकारका विकासका प्राथमिकता परेका बिषय पनि छन । जस्तो भनौँ, कृषि उत्पादन र उर्जामा स्व–निर्भरता, सुरक्षित खाद्य पदार्थ, वातारवणिय प्रदुषण न्युनिकरण, व्यवस्थित शहरको विकास, पुर्वाधार विकास, जलविद्युत, व्यवसाहिक शिक्षा, स्वास्य शिक्षा, संघियतामा शिक्षाको मोडल आदि थुप्रै बिषयमा यस सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । नेपालमा कृिषजन्य पदार्थ र जडीबुटिको प्रशोधन तथा व्यावसायिक विधिका लागि इनोभेसन को–क्रिएसन सेन्टर खोली उद्यमशीलता कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्ने छुट्टै सत्रको आयोजना गरेका छौँ ।
हामीले यो सम्मेलनलाई बहुआयामिक बनाउन चाहेका छाँै । सम्मेलनलाई ज्ञानको मञ्चन गर्ने थलो बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । कसैसँग ईनोभेटिभ आईडिया छ तर लगानी गर्ने पैसा छैन भने उनीहरुलाई सम्भावित लगानीकर्ता भेटाउन यो सम्मेलनले सहयोग गर्नेछ । यसको लागि हामीले एउटा छुट्टै सत्रको आयोजना गरेका छौँ । विदेशमा ज्ञान, सीप सिकेर नेपाल फर्केकाहरुको अवसर र चुनौती के छ, उनीहरु अनुभव साट्नको लागि अर्को सत्रको आयोजना गरिएको छ । सो सत्रमा विदेशबाट फर्किएकाहरुको एलुम्नाईका प्रतिनिधीहरुका प्रतिनिधीहरुलाई आमन्त्रण गरेका छौँ । यस्तै नेपाली विधार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने मुलुकका राजदुतहरु, युजीसी, नास्ट जस्ता अनुसन्धानका लागि श्रोत उपलब्धी गराउने निकायहरुको प्रतिनिधीहरु पनि आमन्त्रित छन् । रिसर्च एण्ड डेभेलोपमेन्टलाई नयाँ सिरामा पुर्‍याउन यस्ता अन्तरकृयाले सहयोग गर्नेछ ।